Author: Moogushakar Julkis
WAX KA BARO DASTUURKA JAMHUURIYADDA SOMALILAND – eidlehsalah
Golaha waxa ku waajib ah inuu hubiyo in tallaabada laga qaaday xubinta ay tahay mid toosan. Jagada Golaha Guurtidu waxay ku bannaanaysaa haddii ay timaado xaalad ka mid ah xaaladaha ku tilmaaman qodobka 50aad. Madaxweynuhu dalka kama maqnaan karo 45 cisho oo isku xiga muddo ka badan sabab caafimaad mooyaane. Guddoomiyaha iyo Guddida Hay’adda Shaqaalaha Dawadda.
Haddii ay Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha isku hal mar ku timaado xaalad ka mid ah xaaladaha ku sheegan qodobka 86aad, waxa xilka Madaxweynaha si ku meel gaadh ah u haynaya Guddoomiyaha Golaha Guurtida. Xubinta Golaha Guurtida uma bannaana inay qabato xil kale oo Qaran iyadoo xilkii loo xulay haysa; umana bannaana may xilka uga faa’iidaysato dano gaar ahaaneed. Xeerka ayaa xadaynaya muddada ugu badan ee qof loo hayn karo baadhitaan.
Muddada xiIka ee Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha waa 5 sano oo ka bilaabanta maalinta xilka bo dhaariyo. Dib-u-dhigid fadhi wuxuu ku ansaxayaa aqiabyad fudud hal dheeri ; waxaana dib loo dhigi karaa ugu badnaan toddoba 7 maalmood. Nidaamka siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Somaliland waxa saldhig u ah nabad, talo-wadaag, dimuqraadiyad iyo hannaanka xisbiyada badan.
Cashuuraha Takaaliifta iyo Ribada Qod. Waxa Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha Iagu dooranayaa qaabka doorashada guud oo toos ah; isla markaana qarsoodi ah iyaga oo isku lammaan. Qof kasta waxa waajib ka saaran yahay daryeelka, ilaalinta iyo badbaadada deegaanka.
Dawladdu waxay horumarinaysaa habka taakulaynta, caymiska iyo badbaadinta shaqaalaha waxaanay xoojinaysaa hay’adaha ku shaqada leh. Shuruuradaha Qofka lsu Taagaya Doorashada Qod. Dawladda Jamhuuriyadda Somaliland waxay ka soo horjeeddaa falalka argagaxis-nimada iwm, ujeeddo kasta ha lahaadeene. Xeer baa caddaynaya sida lagu heli karo ama laga waayi karo jinsiyadda Somali land.
Guddoomiyaha Golaha Wakiilada ayaa leh hab-maamuuska 3aad ee Qaranka. Waxa si gaar ah loo dhiirri gelinayaa fanka, suugaanta iyo ciyaaraha wadaniga ah, iyadoo Ia dhawrayo aadaabta lslaamka. Fadhiga Golaha Wakiiladu waxa uu ku furmi dastuurks marka ay joogaan kala badh in ka badani, marka laga reebo kuraasida bannaanshahooda Ia baahiyay.
Waajibaadka Muwaadinka iyo Ciqaabta Gudasho Jamhuuriyadsa. Kal-fadhiyada iyo Habaynta Golaha Wakiilada Qod. Labada Gole ee Baarlamanku waxay yeelanayaan fadhiyo ay wadaagaan iyo kuwo gaar u kala ah. Si ay u suurta gasho qaban-qaabinta Aftidu, waxa waajib ah in la soo saaro Somali,and Aftida iyada oo laga shiidaal-qaadanayo tilmaamaha Dastuurku asteeyey; waxaana la magacaabayaa guddida qaban-qaabinta Aftida si waafaqsan Dastuurka.
Tirada Golaha iyo Doorashadusa Qod. Xoghayaha gobolka ama degmada iyo madaxda waaxyaha ama laamaha Wasaaradaha ayaa xilka sii fulinaya iyagoo raacaya shuruucdoodii hore inta laga soo dooranayo gole cusub. Hirgelinta iyo Fasiraadda Qod. Bannaanaanshaha Xubinimada Guddida Culimada. Ciidanka Booliisku waxa uu u xilsaaran yahay ilaalinta nabadgelyada iyo dhaqan-gelinta xeerarka; qaab-dhismeedkoooda iyo waajibaadkoodana xeer ayaa qeexaya.
Muwaadin kasta waxa waajib ku ah adkaynta midnimada ummadda, ilaalinta jiritaanka Qaranimada iyo difaaca dalka iyo dunta si waafaqsan xeerka. Shaqada, Farsamada, Daryeelka iyo Badbaadinta Shaqaalaha. Taliyayaasha ciidamada iyo Ku-xigeenadooda. Kala sarraynta iyo takoorka ku salaysan issirka, abtirsiga, dhalashada iyo deegaanku waa reebban yihiin, somalilnad markaa barnaamijyada lagu cidhib tirayo dhaqamada xunxun ee jireenka ah waa waajib Qaran.
Haddii Madaxweynuhu ku qanco warbixinta waxa uu Wasiirka ama Wasiir-ku-xigeenka ka xayuubin doonaa dhowrsannaanta. Golaha Wakiiladu wuxuu yeelanayaa Xoghayn uu madax ka somalilanc Xoghaye Guud oo aan ka tirsanayn Golaha Wakuada; kana kaalmaynaya Shir-guddoonka Golaha hawlaha xafliska, dhammaan arrimaha maaliyadda iyo maamulka, wuxuuna yeelanayaa Ku-xigeen.
Inuu ka garsooro khilaafka ka dhex abuurma laamaha Dawladda oo dhinac ah iyo xubno ka tirsan dadweynaha oo dhinac ah ama dadweynaha dhexdooda. Waxaa reebban urur kasta oo leh ujeeddooyin lid ku ah danaha ummadda ama qarsoodi ah ama Ieh qaab cudan ama hubaysan amaba kuwa kale ee khilaafsan xeerka weji kasta ha lahaadeene.
Deegaanka iyo Wax-ka-qabashada Aafooyinka. Waa inuu jidh ahaan iyo maskax ahaanba gudan karaa xilkiisa 5. Soo-saaridda, Faafinta iyo Dhaqan-gelinta Xeerka.
Xubnaha Guddida Culimada waxa ka reebban. Qofka loo dooranayo xubinimada Golaha Guurtida waa in uu yeesho shuruudaha dasyuurka isu- taagaya xubinimada Golaha Wakulada marka laga reebo da’da iyo heerka aqoonta oo noqonaya sidan hoos ku xusan: Dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland 3- Qod. Maxkamadaha Hoose Qod.